Loolanka kaalinta 4-aad oo adkaaday & rikooradii laga bartay Arsenal V Sunderland. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Loolanka kaalinta 4-aad oo adkaaday & rikooradii laga bartay Arsenal V Sunderland.
Loolanka kaalinta 4-aad oo adkaaday & rikooradii laga bartay Arsenal V Sunderland.
May 17, 2017	16 Views
Kooxda Arsenal ayaa ka adkaatay dhigeeda Sunderland kulan muhiim u ahaa xidigaha macalin Wenger , inkastoo Sunderland ay horaan uxaqiijiyeen inay kasoo muuqan doonaan Championship-ka xagaaga dambe.
Kooxda Arsenal waxa ay rajo ka leeyihiin inay sanadka soo aadan ciyaaraan Champions League waase hadii ay ku dhameystaan 4-ta sare isla markaana Manchester United laga qaado tar-tanka Europe League oo ay kama dambeystiisa kula balansan yihiin kooxda Ajax.
Rikooradii laga bartay kulanka :-
David Moyes ayaa guul dareystay 16 kulan oo uu wajahay macalinka Arsenal Arsene Wenger kulamada Premier League waana macalinka rikoorka guul darrada ugu badan wajahay.
Macalin Wenger ayaa dhankiisa xaqiijiyay in kulankiisii 20-aad uu wajahay macalin David Moyes dhamaan tar-tamada uu guul ka gaaray inta uu maamulayo kooxda Arsenal.
Ma jirto koox ku dhameysatay halka ugu hooseysa horyaalka marka laga reebo Sunderland oo 3 jeer ku dhameysatay waxaa lamid ah kaliya kooxda Nottingham Forest oo 3 jeer ku dhameysatay halka ugu hooseysa horyaalka.
Alexis Sanchez ayaa dhaliyay 6 gool 5 kulan oo Premier League ah oo uu ka hortagay kooxda Sunderland waana koox kamid ah kooxaha uu ugu jecel yahay inuu gool ka dhaliyo kulamada uu wajahayo.
Sanchez ayaa si toos ah ugu lug yeeshay 33 gool oo Premier League ah xili ciyaareedkan 23 gool isagaa dhaliyay 10 kalena saaxiibadiisa kooxda ayuu ka caawiyay , waana mid uu kaga sareeyo dhamaanba ciyaar yahanada kale.
Tan iyo markii uu Ozil kasoo muuqday safka Arsenal 2013 bishii September waa midka ugu caawinta badan Premier League waxaana loo diwaan geliyay 41 caawin.
Kooxda Arsenal weli ma aysan guul dareysan kulan ay garoonkooda Emirates kula ciyaareen kooxda Sunderland 11 jeer waa ay guuleysteen 5 jeerna bar-baro ayey la galeen.